सम्भोगपछि ५ प्रतिशत महिला नुहाउँछन्, अरु के गर्छन् ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com सम्भोगपछि ५ प्रतिशत महिला नुहाउँछन्, अरु के गर्छन् ? - खबर प्रवाह
सम्भोगपछि ५ प्रतिशत महिला नुहाउँछन्, अरु के गर्छन् ?
यौ’न मानवको जीवनमा महत्वपुर्ण मानिन्छ । यो वयस्कहरुको चाहना र आवश्यकतामा पर्दछ । एक वयस्क पुरुष महिलाको तुलनामा यौ’नका बारेमा अत्यधिक सोच्ने गर्दछन् ।
पुरुष चरो’त्मकर्षमा पुगेर वी’य स्ख’लन हुँदा बढि आनन्द महसुस गर्दछ । यो अवधी पुरुषकालागि सबैभन्दा आनन्दित क्षण मध्ये एक पर्दछ । यो’नीभित्र वी’र्य स्ख’लित हुदाँ महिलाले पनि च’रोत्मकर्ष पाउने गर्दछन् ।
वी’र्यभित्र रहेका शुक्रकीटहरु यो’नीभित्र हुने पा’ठेघरको मुख सर्भिक्ससम्म पुग्न अर्थात करिब ६ इन्चको दूरी पार गर्न ५ मिनेटको समय लगाउँछन् । सर्भिक्सभित्र पसेर अझ अण्डासम्म पुग्न शुक्रकीटलाई ७२ घण्टासम्मको समय लाग्न सक्छ ।
अब चर्चा गरौं, यौ’नक्रियापछि महिला के गर्छन् भन्ने बारे । हरेक यौ’नक्रियाको केही बेरमा नै विभिन्न काममा सक्रिय हुन्छन् । कतिसम्म भने यौ’नक्रियापछि ८६ प्रतिशत महिला बाँकी रहेको काम गर्नतर्फ लाग्छन् भने २ प्रतिशत महिला केही खानेकुरा खान्छन् ।
यस्तै विश्वका करीब ३ प्रतिशत महिला यौ’न’क्रियापछि धुुमपान गर्छन् भने ४ प्रतिशत सुत्छन् । र ५ प्रतिशत महिला नुहाउँछन् ।
करेलाका यी बेफाइदा थाहा पाउनुहोस्
यौ’न सम्पर्कबाट स्वास्थ्यमा पुग्ने फाइदा